non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကို ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကို ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကို ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-M စီးရီး Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကို ကို ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuatသို့မဟုတ် ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ အားလုံး ပေါင်းစုံ အလှည့် အခင်အရှင် လျှောက်လွှာများ (linear ရွေ့လျားမှု အခင်အရှင်s)such အဖြစ် ကမ္ဘာလုံး အခင်အရှင်, ဂိတ် အခင်အရှင်, နှင့် etc.AOX-M စီးရီး Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကို ကို ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuatသို့မဟုတ် ဖြစ် drive အားဖြင့် 380V / 220V ပါဝါ, သွင်းအားစု 4-20mA သို့မဟုတ် 0-10VDC ထိန်းချုပ်မှု signal ကို, ရွေ့လျား အခင်အရှင် သို့ အဆိုပါ မှန်သော အနေအထား, နှင့် အောင်မြင်မှု သို့ auသို့matic ထိန်းချုပ်မှု, အဆိုပါ အများဆုံး output ကို tသို့မဟုတ်que ဖြစ် 1000Nm.We များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ ပေး ကျွန်တော်တို့၏ dဖြစ်tributသို့မဟုတ်s နှင့် cusသို့mers နှင့် အဆိုပါ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု။
Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကိုပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn AOX-M စီးရီး၏ setting ကိုနှင့်ရောဂါရှာဖွေအိမ်ရာဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိဘဲ, display screen သို့ပိတျထားသောမှတဆင့်လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ setting ကို tools များနှင့် display ကိုမျက်နှာပြင်အကြားတရားဝင်အကွာအဝေး 1-1.5m အကြောင်းပါ။
AOX-M စီးရီး Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကိုပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator လှည့်အဘို့ 3. ပေါင်းစည်းဒေသခံထိန်းချုပ်ရေး
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာ AOX-M စီးရီး Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကိုပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator ဖွင့်နှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံပေးပါ၏အသွင်အပြင်ကိုသေချာနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကိုပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn AOX-M စီးရီးများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းရယူထားပြီး တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးကိုအားလုံးအဆင့်ဆင့်အတွက်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးလှံတံ၏သဘောတူညီမှုဖြစ်ပါတယ်။
မေး: သင် AOX-M စီးရီး Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကိုပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator လှည့်အဘို့အစတော့ရှယ်ယာရှိပါသလား?
မေး: ငါတို့သည် Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကိုပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်သင့်ရဲ့ AOX-M စီးရီးအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်ငါသည်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား?
hot Tags:: non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကို ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်